Gaas oo Mashaariic Gaalkacyo Dhagax Dhigay oo London u Dhoofay – Radio Daljir
Gaas oo Mashaariic Gaalkacyo Dhagax Dhigay oo London u Dhoofay
May 6, 2017 6:48 g 4
Madaxweye Gaas iyo Wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ka dhoofay magaalada Galkacyo, si ay uga qaybgalaan shirka Soomaaliya quseeya ee 11ka bishaan ka furmi doona Magaalada London.
Shirka London ee waftiga madaxweynuhu u ambabaxewn waxaa ka qaybgalaya wafuud kala duwan iyo madax caalamka ah, Soomaaliya waxaa ka qaybgali doona dhinacyada maamul ee Soomaaliya iyo madaxda dawladda dhexe, waxaana looga hadlayaab sidii Soomaaliya looga taageeri laha dhinacyada mashaariicda dhismaha Ciidanka iyo arimo kale.
Dhinaca kale Madaxweyne Gaas intii uusan ka.dhoofin Gaalkacyo maanta waxaa uu dhagaxdhigay dhismaha dhowr mashruuc oo Gaalkacyo laga dhisayo kuwaas oo ay kamid yihiin iskuulo, cisbitaal, xarun boolis, xarun ay yeelan doonto degmada Gaalkacyo, ceel biyood, iyo dhowr kale.
Warbixintaan waxaa nooga diyaarshay Jamaal Faarax Aadan
Caawa & Daljir iyo Cabdifataax Cumar Geeddi (dhegayso)
Ardada Fasalka 8aad ee Dugsiga Xaaji Aadan Dangorayo iyo Xafladda Qalanjabinta
madaxweyne gaas waxan oranlahaa mudane madaxweyne horumarka dalku kuma koobna ariboor ladhagaxdhigo iyo wado oo keliya ee horumarka hala xoojiyo weliba abnigu ugu horayo
Mohamed Hassan 1 year
sxb airport iyo wado waxudhisabo maqasaraa bro?
Ina Dhabac Wiil Howd 1 year
waan soodhawaynaynaa hadaan nahay ree mudug mashaariicda uu wado madaxweyne gaaas
waaaa arin lagu farxoo reer glkcyo guuuul